HARARE When Zimbabwe's rich and powerful get sick, they often go abroad in search of the best treatment money can buy; ousted President Robert Mugabe died in a hospital in Singapore in 2019. | Video
HARARE When Zimbabwe's rich and powerful get sick, they often go abroad in search of the best treatment money can buy; ousted President Robert Mugabe died in a hospital in Singapore in 2019.
JOHANNESBURG Mass vaccination against COVID-19 is unlikely to start in Africa until midway through next year and keeping vaccines cold could be a big challenge, the continent's disease control group said on Thursday.
JOHANNESBURG/HARARE Having fled an economic implosion in his native Zimbabwe, Brighton Takawira was able to support his mother back home with modest earnings from a small perfume business he set up in South Africa.
HARARE Zimbabwe's state security minister on Monday alleged a plot by "rogue elements" in the opposition working with Western governments to smuggle in guns and foment chaos, signalling another possible crackdown.
HARARE Western diplomats in Zimbabwe expressed deep concern on Friday over a deteriorating political and economic crisis, and said the government should stop using the COVID-19 pandemic to curtail freedoms.